गेष्टहाउस चौरमा सिटी हल कति उपयुक्त ? – Saurahaonline.com
गेष्टहाउस चौरमा सिटी हल कति उपयुक्त ?
चितवन, ३१ भदौँ । चितवनमा आधुनिक सिटी हल निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन भइसकेपछि भरतपुर महानगर समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न अघि बढेको छ ।
क्यान्सर अस्पतालको खाली जमिनमा बनाउने भनिएको सभाहल कांग्रेसले बखेडा निकालेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडिको गेष्ट हाउस चौरमा विकल्पको रुपमा देखिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको स्वामित्वमा रहेको ४ बिगाहा ११ कठ्ठा १६ धुर जग्गालाई विकल्पको रुपमा अघि सारिएको छ । सो ठाउँमा सिटी हल बनाउन राजनीतिक दल सकारात्मक भएका छन् ।
कांग्रेस सभापति जीतनारायण श्रेष्ठले क्यान्सर अस्प्तालको जग्गामा विरोध जनाए पनि सिटीहल गेष्ट हाउस चौरमा बनाउन सहमति जनाएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीको सयोजकत्वमा गठित समितिको बिहीबार बसेको बैठकले उक्त जग्गालाई र जग्गाभित्र निर्मित भौतिक संरचनालाई भरतपुर महानगरमा हस्तान्तरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जग्गा महानगरलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको समन्वय प्रमुख डल्लाकोटीले बताए । मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि महानगरलाई हस्तान्तरण गरिने उनको भनाइ छ ।
हस्तान्तरण गरिएपछि महानगरले संरचना निर्माणका प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने डल्लाकोटीले बताए । उक्त जग्गा निर्णयसँगै राजनीतिक दल पनि सकारात्मक भएका छन् ।
अहिले भरतपुर महानगरपालिकाले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सहयोगमा सिटीहल निर्माण गर्न लागेको हो ।
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले भोगचलन गर्दै आएको यस क्षेत्रको ७८ विघा जग्गामध्ये भरतपुर महानगरपालिकाले सिटी हल बनाउन ५ विघा जग्गा माग गरेको थियो ।
तर, नेपाली कांग्रेसले वीपीको नाम जोडिएको अस्पतालबाट जग्गा दिन नपाइने भन्दै विरोध गरेपछि महानगरपालिका पछि हटेको थियो । कांग्रेसको जिल्लादेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्मले अस्पतालको जग्गा महानगरलाई दिन नमिल्ने भन्दै आन्दोलनको धम्की दिएको थियो ।
महानगरपालिकाको आग्रहमा सबै राजीतिक दलबीच गेष्ट हाउस चौरमा अन्त–र्राष्ट्रियस्तरको सिटीहल बनाउने सहमति भएको महानगर प्रमुख रेनु दाहालले बताइन् । मेयर दाहालले पाँच हजार व्यक्ति अटाउने सिटीहल बनाउने गरी महानगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाउने बताइन् ।
‘बजेटआएकै ४ महिना बितिसक्यो, तर स्थानको टुंगो लागेको छैन’ मेयर दाहालले भनिन्, ‘अन्यत्र जग्गा नपाएपछि गेष्ट हाउस चौरमा नै बनाउने निधो ग¥यौं ।’ सिटीहल निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट निकासा भइसकेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
मलाई त क्यान्सर अस्पतालको जग्गामा नै सिटी हल बनाउन अझै मन छ
‘मलाई त क्यान्सर अस्पतालको जग्गामा नै सिटी हल बनाउन अझै मन छ, यहाँ चित्त बुझेको छैन’ मेयर दाहालले भनिन् । मेयर दाहालले भनिन् ‘क्यान्सर अस्पतालका लागि यतिको धेरै जग्गा आवश्यक नै छैन, जति हामी लिन्छौं त्यति अन्यत्र दिन्छौ भन्दा पनि कांग्रेसले मानेन राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनायो ।’ रकम फ्रिज हुने सम्भावना भएकाले गेष्ट हाउस चौरमै बनाउन लागिएको मेयर दाहालको भनाइ छ ।
यसै जग्गाभित्र हाल वडा कार्यालय, पत्रकार महासंघ, कर्भड हल, पुरानो जिविसको भवन, सार्वजनिक शौचालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको क्वाटर, मन्दिर लगायतका संरचना पनि रहेका छन् । ७५ लाखको लागतमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको शहीद मञ्च पनि यही चौरमा छ ।
मञ्च निर्माणको काम अधुरै छ । यहाँ शहिद मञ्च बनाउने भन्दै निर्माण गरिएको भवन अलपत्र छ । ७५ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको मञ्चका लागि ५१ लाखभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । सिटी हल बनाउने भएपछि यो संरचना पनि भत्काउनुपर्नेछ ।
केही सरोकारवाला पक्षले सहरको बीचमा उपयुक्त हुँदैन कि भन्ने शंका गरेका छन् । गेष्ट हाउस चौरमा पाँच हजार क्षमताको सिटी हल बनाउने निर्णयको नागरिक समाज र केही सरोकारवाला पक्षले खुल्ला चौरको विकल्प रोज्नुपर्ने तर्क राखेका छन् । सहरको बीचमा खुल्ला चौर आवश्यक हुनाले त्यसको विकल्पमा भरतपुर व्यारेक वा आँपटारीस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गालाई प्रयोग गर्न सकिने केही पक्षको भनाइ छ ।
उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले गेष्ट हाउसको विकल्पमा नेपाल ट्रष्टको जग्गालाई प्रयोगमा ल्याउन सकिने तर्क राखेका छन् । भरतपुर–१ को आँपटारीमा रहेको जग्गा वातावरणीय र पर्यटकीय दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने उनको तर्क छ । केही पक्षले अझै पनि क्यान्सरको खाली जमिन उपयुक्त हुने तर्क राखेका छन् ।
सिटी हल बनाउँदा चौर मासिने भएपछि नागरिक समाजले राजनीतिक नेतृत्वको सहमतिलाई अपरिपक्वता र दूरदर्शीताको कमी भएको टिप्पणी गरेको छ ।
धनगढी विष्फोट अपडेट घाइतेमध्ये एकजनाको मृत्यु Friday, July 19th, 2019
जग्गा सरकारी, दर्ता निजी, मोही वाग्मती खोलो Friday, July 19th, 2019
पाँच वर्षीया बालिका बलात्कृत , आरोपित पक्राउ Friday, July 19th, 2019
देशभर बदली, केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना Friday, July 19th, 2019
धनगढी विस्फोटमा पाँच जना घाइते , विप्लव समूह भन्छन् –हामीले विस्फोट गराएको होईन Thursday, July 18th, 2019
‘प्रोफसनल अष्ट्रेलियन हाईयर एजुकेशन फेयर’ मा विद्यार्थीहरुको घुईचो Thursday, July 18th, 2019